အရည်အသွေးမြင့် စိတ်တိုင်းကျ ကြည်လင်သောသက်တံ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော PVC ဗီနိုင်း holographic hologram iridecent ladies လက်ကိုင်အိတ် အမျိုးသမီး စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ | လန်းဟိုင်း
စိတ်ကြိုက်ရှင်းလင်းသောသက်တံ့ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော PVC ဗီနိုင်း holographic hologram အမျိုးသမီးများအတွက် iridecent ladies လက်ကိုင်အိတ်
Polyvinyl chloride (PVC) translucent, တောက်ပြောင်သည်။ PVC သည် လုံးဝအဆိပ်အတောက်ကင်းပြီး အရသာမရှိသော၊ လူ့အရေပြား သို့မဟုတ် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းစနစ်သည် မည်သည့်လှုံ့ဆော်မှုမှမရှိဘဲ၊ ၎င်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ PVC သည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ အအေးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ လျှပ်စစ်လျှပ်ကာ၊ ကောင်းမွန်သော ဆန့်နိုင်အား၊ ကွေးညွှတ်မှု၊ ဖိသိပ်မှုနှင့် ရိုက်ခတ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများ၊ ခိုင်မာသောအက်ဆစ်နှင့် အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်၊ ကောင်းမွန်သော ဓာတုတည်ငြိမ်မှု၊ ၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူကြိုက်များပြီး လူကြိုက်များပြီး တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။ ဓာတုပစ္စည်းတစ်ခု၌။
ထုတ်ကုန်အမည် စိတ်ကြိုက်ရှင်းလင်းသောသက်တံ့ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော PVC ဗီနိုင်း holographic hologram အမျိုးသမီးများအတွက် iridecent ladies လက်ကိုင်အိတ်
ပစ္စည်း Holographic Clear PVC
အထူ 0.3MM- 0.6MM၊ စိတ်ကြိုက်။
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ Logo အသုံးချနည်းပညာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အိတ်များပေါ်တွင် သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုကို အသုံးချနိုင်သည်၊ လိုဂို/တွဲလောင်းတက်ဂ်/ လက်လီထုပ်ပိုးမှုနှင့် အခြားအရာများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
● Silk-screen ပုံနှိပ်
2. ကျွန်ုပ်တို့တွင် စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းများကို ကြိုဆိုသော အုပ်စု prefect နမူနာသခင်များရှိပါသည်။ သင်၏ Artworks/Spec./Ref.Sample စသည်တို့အပေါ် အခြေခံ၍ အိတ်များကို တီထွင်နိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီနိုင်ပါသည်။
3. သင့်တွင် စမ်းသပ်မှုတောင်းဆိုမှုရှိပါက သင့်အတွက် TEST ကို စီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်။
4. Third Party Inspection ကို လက်ခံနိုင်ပြီး ကြိုဆိုပါတယ်။
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် တစ်လလျှင် 600000 ကျပ် စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ပါ။
ထုပ်ပိုးခြင်း။ OPP အိတ်ထဲတွင်ထုပ်ပိုးထားသော 2000 အပိုင်းအစများကိုပုံးထဲတွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။
1. သင်သည် ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလား။
သေးငယ်သော အမှာစာများအတွက်၊ သင်သည် အောက်ပါ ဖော်ပြချက်များကို ရွေးချယ်နိုင်သည်- UPS၊ FedEx၊ TNT၊ DHL၊ EMS။ ထုထည်ကြီးကြီးမားမားအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် ကုန်ပစ္စည်းများကို လေယာဉ်ဖြင့် သို့မဟုတ် ရေကြောင်းဖြင့် ပို့ဆောင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးမားသောတန်ဖိုးအတွက် T/T၊ L/C ကိုလက်ခံပြီး အသေးစားအမှာစာများအတွက်၊ Paypal၊ Western Union၊ Moneygram၊ Escrow စသည်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးချေနိုင်ပါသည်။
4. ငါ့နိုင်ငံကို တင်ပို့ဖို့ ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ။
ရာသီများနှင့် မတူညီသော ပေးပို့သူများအပေါ် မူတည်သည်။ အခကြေးငွေသည် မတူညီသော forwarder များမှ ကမ်းလှမ်းသည်နှင့် မတူညီသောရာသီများတွင် ကွဲပြားပါသည်။ သင်၏အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့အား အချိန်မရွေး တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
နမူနာများကို အတည်ပြုပြီးနောက် အစုလိုက်ပို့ဆောင်သည့်အချိန်သည် 15-30 ရက်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီး အပ်ငွေပေးချေပြီးဖြစ်သည်။
6. သင့်ထုတ်ကုန်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏လိုဂို/ဘားကုဒ်/ထူးခြားသော QR ကုဒ်/စီးရီးနံပါတ်ကို ကျွန်ုပ်ပရင့်ထုတ်နိုင်ပါသလား။
7. ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုအတွက် နမူနာအချို့ကို မှာကြားနိုင်ပါသလား။
နမူနာများကို FOB စျေးနှုန်းများ x2ဖြင့် ပြေစာပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း သင်အမှာစာများတင်ပြီး အရောင်တစ်ခုလျှင် ပုံစံတစ်ခုလျှင် MOQ 500 pcs ပြည့်မီသောအခါ ၎င်းကို ပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။
8. ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ကုန်များကို အထူးပုံစံဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM နှင့် ODM ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးပါသည်။
9. ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များကို လက်ခံရရှိမည်ကို သင် မည်သို့သေချာအောင် ပြုလုပ်နိုင်မည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဌာနတွင်း QC စစ်ဆေးမှုများရှိပြီး သင်အလိုရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် အစုလိုက်ထုတ်ကုန်များကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် AQL စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ယခင်- Holographic ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောလက်ကိုင်အိတ် Hologram လေဆာ PVC Tote စျေးဝယ်အိတ်
Pvc Transparent Makeup Bag ၊
ဖောက်ထွင်း Pvc သဲအိတ်
ဖောက်ထွင်း Pvc ပခုံးအိတ်
ဖောက်ထွင်း Pvc ဇစ်အိတ်